ठूलो क्षमता फ्रेम चलिरहेको प्रकार वायवीय लिफ्ट मिक्सर - चीन ठूलो क्षमता फ्रेम चलिरहेको प्रकार वायवीय लिफ्ट मिक्सर आपूर्तिकर्ता,कारखाना -HX
ठूलो क्षमता फ्रेम चलिरहेको प्रकार वायवीय लिफ्ट मिक्सर
अघिल्लो : HXTUSD डबल - लिफ्ट उठाउने र न्युमेटिक मिक्सर सार्दै
अर्को : HXUD फिक्स्ड फ्रेम लिफ्ट एयर मिक्सर
· संकुचित हावा शक्ति स्रोत हो, 100% विस्फोट प्रूफ, सुरक्षित र भरपर्दो। यो लगातार र सुरक्षित अपरेसन गर्न सकिन्छ केहि खतरनाक काम गर्ने स्थितिहरूमा जस्तै ज्वलनशील र विस्फोटक. मूल्या air्कन गरिएको वायु चाप ०..6 एमपीए हो (0.1-0.6Mpa मिक्सनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ).
·२l०l खुला ब्यारेल पेन्टमा लागू, मसी, सौन्दर्य प्रसाधन र अन्य रासायनिक तरल पदार्थ मिश्रण, मिक्सन र फैलाव.
· मानक उठाने उचाई: 1050जमीनमा इम्पाइलरको मिमी उठाइएपछि (ग्राहकको ब्यारेल आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ).
3. वायमेटिक मिक्सरको काम गर्ने वातावरण कम्पनले असर गर्दैन, high temperature, विद्युत चुम्बकीय, विकिरण, आदि. यो कठोर कार्य वातावरणको लाग�उच्च तापक्रम�्त छ र ज्वलनशीलको प्रतिकूल परिस्थितिहरूमा सामान्य रूपमा काम गर्न सक्दछ, विस्फोटक, high temperature, कम्पन, आर्द्रता र धुलो.
5. न्युमेटिक मिक्सरसँग उच्च सुरू गर्ने टोक़ छ र लोडको साथ सीधा सुरू गर्न सकिन्छ.
6. वायमेटिक मिक्सर चलाउन र मद्दत गर्न सजिलो छ. हावा मोटरको संरचना सरल छ, सानो आकार, हल्का तौल र ठूलो हर्सपावर. हावा मध्यमको रूपमा प्रयोग गरीन्छ, सञ्चालन गर्न सजिलो र मर्मत गर्न सजिलो.